कम्प्युटरको पासवर्ड बिर्सनुभयो ? त्यसोभए पुरानो पासवर्ड नहालिकन नै यसरी नयाँ पासवर्ड सेट गर्नुस् - Technology Khabar
» कम्प्युटरको पासवर्ड बिर्सनुभयो ? त्यसोभए पुरानो पासवर्ड नहालिकन नै यसरी नयाँ पासवर्ड सेट गर्नुस्
आजकल सबैलाई थाहा छ कि कसरी कम्प्युटर प्रयोग गर्ने, तर के तपाइँ सामान्य ट्रिकहरू प्रयोग गरेर कम्प्युटरको मास्टर बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ।
यदि तपाईं पुरानो पासवर्ड हरायो र बिर्सनुभयो भने के गर्ने ? यदि तपाईं पुरानो पासवर्ड प्रविष्ट नगरी नयाँ पासवर्ड सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्ने ?
यदि तपाइँ कम्प्युटरमा पासवर्ड परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्ने ? यो गर्नका लागि तपाई प्राय जसो कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहुन्छ र पहिले प्रयोगकर्ता एकाउन्टमा जानुहुन्छ र तपाईको पुरानो पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहुन्छ । यसपछि तपाइँको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहुन्छ।
तर यदि तपाइँ कन्ट्रोल प्यानलमा नगईकन नै पुरानो पासवर्ड प्रविष्ट नगरिकन नै तपाइँको कम्प्युटर वा ल्यापटपको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तब यसको लागि तपाइँले सजिलो तरीका अपनाउनुपर्नेछ, यसपछि तपाइँको कम्प्युटर वा ल्यापटपमा पुरानो पासवर्ड थाहा नभए पनि नयाँ पासवर्ड सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
पुरानो पासवर्ड नहालिकन नै नयाँ पासवर्ड यसरी बनाउनुहोस्
यसको लागि, तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा कमान्ड प्रम्प्ट (Command Prompt) खोल्नु पर्छ। यस पछि, तपाईले कमाण्ड प्रम्प्टमा दायाँ क्लिक गर्नुपर्नेछ जुन तपाईले एडमिनिस्ट्रेशनको रूपमा(Run as administrator) चलाउने विकल्प देख्नुहुनेछ र तपाईले त्यसलाई छनौट गर्नुपर्नेछ, अब तपाईले यसलाई खोल्नु पर्छ, तपाईले नेट प्रयोगकर्ता(Run as administrator) टाइप गर्नुपर्नेछ ।
तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा नेट प्रयोगकर्ताहरू टाइप गर्ने बित्तिक त्यहाँ भएका सबै यूजरहरुको नाम देखिनेछ । नेट यूजरपछि जून यूजर नाम आउँछ त्यसलाई टाइप गर्नुपर्नेछ। यस पछि तपाईले स्पेस बटन थिच्नु पर्छ र तपाई अब जून नयाँ पासवर्ड सेट गर्न चाहानुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ ।
यो गर्दा तपाईलाई कुनै पनि पुरानो पासवर्डको आवश्यकता पर्दैन। अब मात्र इन्टर बटन थिच्नुहोस्। जब तपाईं यो गर्नुहुन्छ, तपाईं स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ, आदेश सफलतापूर्वक समाप्त भयो (the command completed successfully)। यसको मतलव तपाईको कम्प्युटर वा ल्यापटपको पासवर्ड परिवर्तन गरिएको छ, त्यो पनि कन्ट्रोल प्यानलमा नगईकन नै ।
अब नयाँ पासवर्डका साथ मज्जाले कम्प्यूटर चलाउनुहोस् ।
मोबाइल एक्स्पोको १ लाख रुपैंयाँको बम्पर पुरस्कार शान्ति राईले जितिन